Hadliye oo iska fogeeyay inuu heshiis la galay dowlada Norwey - NorSom News
Hadliye oo iska fogeeyay inuu heshiis la galay dowlada Norwey
Wasiirka arimaha dibada dowlada Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye oo kamid ahaa wafdigii dowlada Soomaaliya ka socdey ee isbuucii lasoo dhaafay socdaalka shaqo ku joogay Norwey ayaa sheegay inuusan jirin wax heshiis ah oo ku saabsan celinta dadka soomaaliyeed ee sharciga loo diiday uu asaga shaqsiyan ula galay dowlada Norwey. Hadliye oo waraysi siinayay laanta af soomaaliga ee idaacada VOE ayaa sheegay inuu Norwey u tagay ka qaybgalka kulan ay ku weheliyeen 12 wasiir arimo-dibadeed oo ka socda wadamo african ah iyo wasiiraha arimaha dibada ee wadamada la isku yiraahdo NORDIC. Wax ku saabsan qoxooti iyo dad soomaali ah oo la celinaya aan looga hadlin kulankaas oo khamiistii iyo jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay Oslo.
Mar wax laga waydiiyay sababta ay safarkiisa ugu weheliyeen wasiirka arimaha amniga qaranka Soomaaliya Cabdirisaaq Cumar iyo madaxa laanta socdaal General Gaafow ayuu ku jawaabtay in aysan isaga iyo General gaafow aysan isla socan markii hore ayna isla soo noqon markii danbe, balse ay meesha uu isugu imaadeen. Hadliye ayaa sidoo kale sheegay in hadiiba ay jiraan dad soomaali oo lasoo celinayo ay tahay arin masuul ka tahay wasaarada arimaha gudaha, gaar ahaan laanta socdaalka iyo wasiirada amniga qaranka, bal asagu uusan wax kala socon shaqsiyan ka wasiir arimo dibadeed ahaan. Waxaan ka ogahay majirto, waxna aan saxiisay majiraan ayuu si cad u qeexay hadliye.
Wasiirka ayaa intaas kusii daray in ay adagtahay in ay caalamka ka dhaadhiciyaan in uu wadankii oo hagaagay isla markaana aad dowladu diido in dadkii wadanka u dhashay dib loogu soo celiyo. Balse siyaasad ayaan dajinay aan rabno in aan qofna qasab laguu soo celin, sidoo kalena dadka danbiyada galay ee loo haysto howlaha xagjirnimada ama danbiyo kale aan dalka lagu soo celin karin.
Previous articleAskarigii xabada ku dhuftay gabadha soomaalida ah Grønland oo la sheegay inuusan qalad galin
Next articleUDI: Xaalada amaan ee qaybo kamid ah Soomaaliya wax badan ayaa iska badalay